လိင္စိတ္ ေလ်ာ့နည္းလာတဲ့ အေၾကာင္းရင္း – Gentleman Magazine
ချစ်တင်းနှီးနှောချင်စိတ် လျော့နည်းလာတဲ့ အကြောင်းရင်း ငါးချက်
လက်ထပ်ပြီးစ လေးငါးလလောက်ကတော့ အရမ်းတက်ကြွနေမှာပါ၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အမြဲ ထိကိုင်နေချင်တယ်၊ လိင်ကိစ္စ တစ်နေ့ကို သုံးကြိမ်လောက် လုပ်ဖြစ်မှာပါ။ ဆက်ဆံနည်းမျိုးစုံနဲ့ တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင် ဆက်ဆံမယ်။ ချစ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာ နှစ်ယောက်သား ပျော်မွေ့နေမှာပါ။
နောက်ကျတော့ အဲဒါတွေ အရှိန်လျော့သွားတယ်။ လက်ထပ်ပြီး နည်းနည်းကြာတော့ အရှိန်လျော့သွားတာ ပုံမှန်ဖြစ်ပေမယ့် လုံးဝနီးပါး ရပ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ ပုံမှန် မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒီမှာ သူမ မဆက်ဆံချင်ရတဲ့ အကြောင်း ငါးချက်နဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁. မဆက်ဆံတာကို အကျင့်ဖြစ်သွားလို့ပါ သူမ စိတ်ဖိစီးနေရင်၊ ပင်ပန်းနေရင်၊ မအားရင် မဆက်ဆံ ဖြစ်တော့ပါဘူး။ သင် ရက်အနည်းငယ် မဆက်ဆံမိတာကနေ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ရက်သတ္တပါတ်တွေ ဖြစ်သွားမယ်။ အပါတ်တွေကနေ လတွေ ဖြစ်သွားမှာပါ။ မဆက်ဆံဖြစ်တာ ကြာလေ၊ ပုံမှန်ပြန်ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ ခက်ခဲလေပါ။ အဲလိုမဖြစ်ဖို့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြဲ ပွတ်သီးပွတ်သပ်နေပါ။ မအားရင်တောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ စာလေးတွေ ပို့ပေးပါ။ ရေတူတူချိုးပါ။ ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ စက်ဘီးစီးသလိုပါပဲ။ စီးလိုက်မှပါ။ မစီးပဲနဲ့ စီးတတ်ချင်လို့ မရပါဘူး။ လိင်ကိစ္စ တစ်ခေါက် စလုပ်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
၂. ကွာရှင်းချင်နေတာပါ မိန်းမတစ်ယောက်က သူ့ပါတနာကို ကွာရှင်းချင်နေပြီဆိုရင် လိင်ကိစ္စ ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရပ်တန့်တိုင်း ကွာရှင်းချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရမ်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အဲလိုမဖြစ်ဖို့ သင့်ပါတနာကို ကြင်နာပါ။ လေးစားပါ။ ချစ်ပြပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိပါ။ ဖြစ်ခဲ့ရင် ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ သူမကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးကြည့်ပါ။ စိတ်ထဲမှာ မြုံပြီးကြောက်နေရင်တော့ နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် မကောင်းပါဘူး။
၃. သူမကိုယ်သူမ ဆွဲဆောင်မှု မရှိတော့ဘူး ထင်နေလို့ပါ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဝိတ်တက်လာရင်၊ ဒါမှမဟုတ် ကလေးမွေးပြီးသွားရင် ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် မခံစားရတော့ပါဘူး။အဲဒါဆို မဆက်ဆံချင်တော့ပါဘူး။ အဲလိုမဖြစ်ဖို့ သူမကို ဦးစီးဦးဆောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင် ပြောပေးပါ။ သူမက အမြဲ လှနေတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပါ။ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဝနေတာကို တိုက်ရိုက်ကြီးမပြောပါနဲ့။ သင်ကဦးဆောင်ပြီး ဝိတ်ချပြပါ။ သူမ အားကိုးရလောက်တဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ။
၄. သူမက ဖောက်ပြန်နေတာပါ ဒါဟာ အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေပါ။ သင့်ဆီက လိင်ကိစ္စ မလိုချင်ရတာက တခြားတစ်ယောက်ဆီက ရနေလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မသေချာပဲ ရမ်းမစွပ်စွဲပါနဲ့။ အဲလိုမဖြစ်ဖို့ သူမစရိုက်တွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။ ည အချိန်မတော် ဖုန်းဆက်နေတာ၊ ဖုန်းကို ဖွက်ထားတာ၊ အိမ်နောက်ကျပြန်တာ၊ အဲဒါတွေကို တွေ့ခဲ့ရင်တော့ ပွင့်လင်းမှုက အဓိကပါပဲ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးကြည့်ပါ။ ဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်တော့ လမ်းခွဲဖို့နဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ နှစ်မျိုးပဲ ရွေးစရာရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သင်တို့နဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘာကြောင့် ဖောက်ပြန်ရတာလဲဆိုတာ သိအောင်လုပ်ပြီး သူမလိုတာ ဖြည့်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
၅. အဲဒိကိစ္စကို ပျင်းလာလို့ပါ လိင်ကိစ္စမှာ ရိုးလာ ပျင်းလာသူဟာ ပုံစံသစ်တွေကို သုံးရင်သုံး၊ မဟုတ်ရင် မြန်မြန် ပြီးပြီးရော လုပ်လာတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါက အတွဲတိုင်းမှာ ဖြစ်လာတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ဖြေရှင်းဖို့က တော့ ပုံစံသစ်တွေ၊ နေရာသစ်တွေ၊ အပြုအမူသစ်တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ခွေ တူတူကြည့်ပြီး ပုံစံ အသစ်တွေကို တူတူလေ့လာပါ။ အရေးကြီးတာက သင် ပျင်းလာရင် ပျင်းလာတယ်ပြောပါ။ သင်တို့နှစ်ယောက် တူတူ ကြည့်လို့ရတဲ့၊ ဖတ်လို့ရတဲ့ အရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
Previous: ကမၻာ့ပထမဆံုး က်ားအဂၤါ အစားထိုးကုသမႈ ေအာင္ျမင္
Next: မ်က္လံုးအေရာင္ေျပာင္းဖို႔ ကုသႏိုင္ၿပီ